Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): Burma Army Shoots, Tortures and Murders Civilian
at 5/21/2015 08:40:00 AM
ဗမာ အစိုးရ တပ်ရင်း ခလရ ( ၁၅ ) နဲ့ ( ၁၄၂ ) ယုတ်မာရက်စက်မှု
မေလ ၉ ရက်နေ့မှာ ဗမာ စစ်တပ် ထုိုးစစ်ဆင်နေတဲ့ နမ်လင်းမ်ပါ (Nam Lim Pa) တောင်ဖက်က Man Gau ရွာ နားက Nam Hpye ချောင်းဘေး မှာ အသက် ၄၀ အရွယ်၊ ကလေး နှစ်ယောက် ဖခင်၊ မင်းထက် ဆုိုတဲ့ ရှမ်း ရွာသား တစ်ယောက် ကုို ဗမာ စစ်တပ် သေနတ်နဲ့ ပစ်ပြီး မသေသေးခင် မသေမချင်း ဓါးနဲ့ လှီးသတ် ထားတယ် လုို့ သိရ ပါတယ်။
A civilian farmer, Min Htet from Mung Hkawng IDP Camp, was murdered on Saturday May9by Burma Army troops .The 40 year old father of two, was shot and then tortured to death by Burma Army soldiers from Battalions 15 and 142.
The victim was shot in the chest while he was on the way to tend to his pigs. As the shot did not kill him, the Burma Army troops then proceeded to knife him in the face and then beat him to death withastave..